တစ်ယောက်တည်း မကြည့်သင့်တဲ့ ဘောလိဝုဒ်သရဲကား (၄)ကား -
Posted on January 31, 2019 January 31, 2019 Author Aye Mon Kyaw	Comment(0)
အနောက်တိုင်း သရဲကားတွေ၊ ကိုရီးယား ဂျပန် သရဲကားတွေ ကြည့်ရတာ ရိုးလာတဲ့ ယောင်းတို့ အတွက် IMDB မြင့် ဘောလိဝုဒ်သရဲကားကောင်း တချို့နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီကားတွေက တစ်ယောက်တည်း မကြည့်သင့်တဲ့ ကားတွေလို့လည်း နာမည်ကြီးပါတယ်။
(1) Raat (1992)
1992 တုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ IMDB 7.2 အထိ ရထားတဲ့အထိ နာမည်ကြီးပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Shaman မိသားစုဟာ တောမကျ မြို့မကျနေရာလေးကို ပြောင်းရွှေ့လာပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အိမ်အသစ်ကတော့ အဲ့ဒေသမှာ သရဲခြောက်တယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီး Shaman မိသားစုကတော့ ဒါကို ကောလဟာလလို့ပဲ သတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Shaman မိသားစုရဲ့ တူလေးဖြစ်သူ Bunti တစ်ယောက်ဟာ တနေ့မှာ ထူးဆန်းတဲ့ကြောင်တစ်ကောင်ကို အိမ်ခေါ်လာပါတယ်။ နတ်ဆိုးဆန်တဲ့ ကြောင်တစ်ကောင် အိမ်ပေါ်ကို ရောက်လာရာကနေ ထူးခြားတဲ့ကိစ္စတွေဟာ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆက်တိုက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ Shaman မိသားစုရဲ့ သမီး၊ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Mini ရဲ့ အပြုအမူတွေကလည်း မူမမှန်တော့ဘဲ ကြောက်စရာကောင်းလာပါတော့တယ်။
ကြုံတွေ့နေရတဲ့ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေကို Shaman မိသားစု ဖြေရှင်းနိုင်ပါ့မလား? ဒီဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေရဲ့ နောက်ကွယ်အကြောင်းတရားတွေက ဘာတွေလဲ?
ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ကြည့်နေကျ သရဲကားပုံစံတွေနဲ့ ကွဲထွက်တာကြောင့် classic cult အနေနဲ့ ခုထိ သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။
(2) Bhoot (2003)
IMDB 6.3 အထိ ရထားပြီး ၂၀၀၃ခုနှစ်က ထွက်ထားပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် လင်မယားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဗစ်ရှယ်နဲ့ ဆွာတီဟာ တိုက်ခန်းတစ်ခုကို ငှားရမ်းဖို့ ရှာဖွေနေကြပါတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ အတော်လေး အဆင့်မြင့်ပြီး ဈေးကြီးမယ်ထင်ရတဲ့ အခန်းတစ်ခန်းကို ဈေးပေါပေါနဲ့ ရသွားပါရော။ ကံဆိုးချင်တော့ အဲ့တိုက်ခန်းမှာ မူလနေသူ မုဆိုးမဟာ သားအရင်းဖြစ်သူကိုသတ်ပြီး သူကိုယ်တိုင်လည်း တိုက်ပေါ်ကနေ ခုန်ချသတ်သေသွားတဲ့ ရာဇဝင်ရှိပါသတဲ့။
ဗစ်ရှယ်ဟာ ဇနီးဖြစ်သူ ဆွာတီ ကြောက်မှာစိုးလို့ ဒီကိစ္စတွေကို ဖုံးကွယ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဆွာတီတစ်ယောက် ထူးဆန်းတာတွေ မြင်တွေ့လာရတဲ့အခါ……သူမကိုယ်တိုင်လည်း ထူးထူးဆန်းဆန်း မူမမှန်တာတွေ လုပ်လာတဲ့အခါ… ဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲ?
ဗစ်ရှယ်တစ်ယောက် ဇနီးဖြစ်သူ ဆွာတီကို အချိန်မှီ ကယ်တင်နိုင်ပါ့မလား?
Raatကို ရိုက်ကူးတဲ့ နာမည်ကြီး ဒါရိုက်တာ Ram Gopal Varmaရဲ့ ဒုတိယလက်ရာမို့ ကြောက်စရာမကောင်းမှာကို တော့ စိတ်မပူနဲ့နော်😜
(3) Ek Thi Daayan(2013)
IMDB 5.7 အထိ ရထားပြီး သရဲတစ္ဆေ နဲ့ မှော်ပညာကို ရောထားတဲ့ သဘာဝလွန်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အိန္ဒိယရဲ့ ထိပ်တန်း မျက်လှည့်ဆရာဖြစ်တဲ့ Bejoy Charan ဟာ ပြဿနာတချို့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ hallucinations ပြဿနာဖြစ်တဲ့ သွားလေသူ ညီမလေးကို ခဏခဏမြင်နေမိတာပါပဲ။ သေသွားတဲ့ ညီမလေးဟာ Bejoy ရဲ့ စိတ်ကို အမြဲတစေ ခြောက်လှန့်နေပြီး တစ်ကြိမ်ထက် တစ်ကြိမ် ပိုပိုဆိုးလာပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူဟာ စိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဆီသွားပြီး အကူအညီတောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ Bejoy ညီမဖြစ်သူရဲ့ သေဆုံးမှုဟာ သွေးရိုးသားရိုးမဟုတ်ဘဲ စုန်းမတစ်ယောက် ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အခါ၊ စုန်းမဟာ တစ်နေ့ကျရင် Bejoy ဆီကိုလည်း လာခဲ့မယ်လို့ ကြိမ်းဝါးထားတဲ့အခါ….
Bejoy တစ်ယောက် သူတို့မောင်နှမဘဝကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ စုန်းမလက်ထဲကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား?
(4) Bees Saal Baad (1962)
1962 တုန်းက ထွက်တာမို့ ဇာတ်လမ်းအိုကြီး ဆိုပြီး အထင်တော့ သေးလို့မရဘူးနော်။ IMDB 7.1 အထိ ရထားပြီး အကောင်းဆုံး အိန္ဒိယသရဲကားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။
ရွာတစ်ရွာမှာ မြေရှင်တစ်ယောက်ဟာ မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက်ကို မုဒိန်းကျင့်လိုက်တာမို့ ကောင်မလေးဟာ အရှက်ရပြီး သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကောင်မလေးဟာ မကျွတ်မလွတ်ဘဲ လက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ သူ(မ)ကို မုဒိန်းကျင့်သူကို သတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ အလားတူ မုဒိန်းကျင့်သူရဲ့ သားကိုလည်း သတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
အဲ့လိုနဲ့ နှစ်၂၀ကြာပြီးတဲ့အခါ မြေရှင်ကြီးရဲ့ မြေးKumar ဟာ ရွာကိုပြန်လာပါတယ်။ ရွာသားတွေကတော့ အမုန်းမီးတွေလောင်နေတဲ့ မိန်းမပျို ဝိဉာဉ်ဟာ ခုထိရှိနေတုန်း ဖြစ်တာမို့ မြေးဖြစ်သူကိုလည်း သတ်ပစ်လိမ့်မယ်လို့ သတိပေးကြပါတယ်။
ဒါတွေကို မယုံကြည်တဲ့ မြေးဖြစ်သူကတော့ ရွာမှာ ဆက်လက်နေထိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ညမှာတော့ မိန်းမပျိုတစ်ယောက်ရဲ့ သီချင်းညည်းသံကို ကြားရပြီး ဘယ်သူဆိုမှန်း မသိရပါဘူး။
တစ်ရက်မှာ Kumar ရဲ့ ကုတ်အင်္ကျီကို တစ်စုံတစ်ယောက်က ယူဝတ်သွားပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အဲဒီလူဟာ အသတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ Kumar ရဲ့ အဘိုးနဲ့ အဖေ အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ နေရာမှာပဲ အဲဒီလူဟာ သေဆုံးနေခဲ့ပါတယ်။
ရွာသားတွေပြောတဲ့ မိန်းမပျို ဝိညာဉ်က ခုထိရှိနေတာလား? Kumarကြားနေရတဲ့ သီချင်းသံက ဘယ်ကလာတာလဲ? ခုထိ မကျေအေးနိုင်သေးတဲ့ ဝိဉာဉ် လက်က လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား? အဘိုးနဲ့ အဖေလိုပဲ အသတ်ခံရမှာလား? …စတာတွေကိုတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆက်ကြည့်ကြပါတော့လို့ 😛
ဒါတွေကတော့ အင်္ဂလိပ်သရဲကားတွေ၊ ကိုရီးယား ဂျပန် ရုပ်ရှင်တွေကို ရိုးအီလာတဲ့အခါ ပြောင်းကြည့်သင့်တဲ့ ဘောလိဝုဒ် သရဲကားကောင်းတွေပါ ယောင်းတို့ရေ…
Reference links: scoopwhoop.com wikipedia.com m.imdb.com
IMDB မှာလညျး Rating တှမွေငျ့တယျဆိုတော့ လူစုပွီးကွညျ့ရမှာပဲ
အနောကျတိုငျး သရဲကားတှေ၊ ကိုရီးယား ဂပြနျ သရဲကားတှေ ကွညျ့ရတာ ရိုးလာတဲ့ ယောငျးတို့ အတှကျ IMDB မွငျ့ ဘောလိဝုဒျသရဲကားကောငျး တခြို့နဲ့ မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ ဒီကားတှကေ တဈယောကျတညျး မကွညျ့သငျ့တဲ့ ကားတှလေို့လညျး နာမညျကွီးပါတယျ။
1992 တုနျးက ထှကျခဲ့တဲ့ ဒီဇာတျကားဟာ IMDB 7.2 အထိ ရထားတဲ့အထိ နာမညျကွီးပါတယျ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ Shaman မိသားစုဟာ တောမကြ မွို့မကနြရောလေးကို ပွောငျးရှလေ့ာပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ အိမျအသဈကတော့ အဲ့ဒသေမှာ သရဲခွောကျတယျလို့ နာမညျကွီးတဲ့အိမျဖွဈပွီး Shaman မိသားစုကတော့ ဒါကို ကောလဟာလလို့ပဲ သတျမှတျထားခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ Shaman မိသားစုရဲ့ တူလေးဖွဈသူ Bunti တဈယောကျဟာ တနမှေ့ာ ထူးဆနျးတဲ့ကွောငျတဈကောငျကို အိမျချေါလာပါတယျ။ နတျဆိုးဆနျတဲ့ ကွောငျတဈကောငျ အိမျပျေါကို ရောကျလာရာကနေ ထူးခွားတဲ့ကိစ်စတှဟော တဈခုပွီးတဈခု ဆကျတိုကျဖွဈလာပါတော့တယျ။ Shaman မိသားစုရဲ့ သမီး၊ ဆယျကြျောသကျအရှယျ Mini ရဲ့ အပွုအမူတှကေလညျး မူမမှနျတော့ဘဲ ကွောကျစရာကောငျးလာပါတော့တယျ။
ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ သဘာဝလှနျဖွဈရပျဆနျးတှကေို Shaman မိသားစု ဖွရှေငျးနိုငျပါ့မလား? ဒီဖွဈရပျဆနျးတှရေဲ့ နောကျကှယျအကွောငျးတရားတှကေ ဘာတှလေဲ?
ဒီရုပျရှငျဟာ ကွညျ့နကြေ သရဲကားပုံစံတှနေဲ့ ကှဲထှကျတာကွောငျ့ classic cult အနနေဲ့ ခုထိ သတျမှတျခံထားရပါတယျ။
IMDB 6.3 အထိ ရထားပွီး ၂၀၀၃ခုနှဈက ထှကျထားပါတယျ။
ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျ လငျမယားနှဈယောကျဖွဈတဲ့ ဗဈရှယျနဲ့ ဆှာတီဟာ တိုကျခနျးတဈခုကို ငှားရမျးဖို့ ရှာဖှနေကွေပါတယျ။ ကံကောငျးခငျြတော့ အတျောလေး အဆငျ့မွငျ့ပွီး ဈေးကွီးမယျထငျရတဲ့ အခနျးတဈခနျးကို ဈေးပေါပေါနဲ့ ရသှားပါရော။ ကံဆိုးခငျြတော့ အဲ့တိုကျခနျးမှာ မူလနသေူ မုဆိုးမဟာ သားအရငျးဖွဈသူကိုသတျပွီး သူကိုယျတိုငျလညျး တိုကျပျေါကနေ ခုနျခသြတျသသှေားတဲ့ ရာဇဝငျရှိပါသတဲ့။
ဗဈရှယျဟာ ဇနီးဖွဈသူ ဆှာတီ ကွောကျမှာစိုးလို့ ဒီကိစ်စတှကေို ဖုံးကှယျထားခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သိပျမကွာခငျမှာပဲ ဆှာတီတဈယောကျ ထူးဆနျးတာတှေ မွငျတှလေ့ာရတဲ့အခါ……သူမကိုယျတိုငျလညျး ထူးထူးဆနျးဆနျး မူမမှနျတာတှေ လုပျလာတဲ့အခါ… ဘာဆကျဖွဈမှာလဲ?
ဗဈရှယျတဈယောကျ ဇနီးဖွဈသူ ဆှာတီကို အခြိနျမှီ ကယျတငျနိုငျပါ့မလား?
Raatကို ရိုကျကူးတဲ့ နာမညျကွီး ဒါရိုကျတာ Ram Gopal Varmaရဲ့ ဒုတိယလကျရာမို့ ကွောကျစရာမကောငျးမှာကို တော့ စိတျမပူနဲ့နျော
IMDB 5.7 အထိ ရထားပွီး သရဲတစ်ဆေ နဲ့ မှျောပညာကို ရောထားတဲ့ သဘာဝလှနျဇာတျလမျးဖွဈပါတယျ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ အိန်ဒိယရဲ့ ထိပျတနျး မကျြလှညျ့ဆရာဖွဈတဲ့ Bejoy Charan ဟာ ပွဿနာတခြို့ ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။
အဲ့ဒါကတော့ hallucinations ပွဿနာဖွဈတဲ့ သှားလသေူ ညီမလေးကို ခဏခဏမွငျနမေိတာပါပဲ။ သသှေားတဲ့ ညီမလေးဟာ Bejoy ရဲ့ စိတျကို အမွဲတစေ ခွောကျလှနျ့နပွေီး တဈကွိမျထကျ တဈကွိမျ ပိုပိုဆိုးလာပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ သူဟာ စိတျပညာရှငျတဈယောကျဆီသှားပွီး အကူအညီတောငျးဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ။ Bejoy ညီမဖွဈသူရဲ့ သဆေုံးမှုဟာ သှေးရိုးသားရိုးမဟုတျဘဲ စုနျးမတဈယောကျ ပါဝငျပတျသကျနတေဲ့အခါ၊ စုနျးမဟာ တနကေ့ရြငျ Bejoyဆီကိုလညျး လာခဲ့မယျလို့ ကွိမျးဝါးထားတဲ့အခါ….
Bejoy တဈယောကျ သူတို့မောငျနှမဘဝကို ဖကျြဆီးခဲ့တဲ့ စုနျးမလကျထဲကနေ လှတျမွောကျနိုငျပါ့မလား?
1962 တုနျးက ထှကျတာမို့ ဇာတျလမျးအိုကွီး ဆိုပွီး အထငျတော့ သေးလို့မရဘူးနျော။ IMDB 7.1 အထိ ရထားပွီး အကောငျးဆုံး အိန်ဒိယသရဲကားအဖွဈ သတျမှတျခံထားရပါတယျ။
ရှာတဈရှာမှာ မွရှေငျတဈယောကျဟာ မိနျးမပြိုလေးတဈယောကျကို မုဒိနျးကငျြ့လိုကျတာမို့ ကောငျမလေးဟာ အရှကျရပွီး သူ့ကိုယျသူ သတျသသှေားပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကောငျမလေးဟာ မကြှတျမလှတျဘဲ လကျစားခတြေဲ့အနနေဲ့ သူ(မ)ကို မုဒိနျးကငျြ့သူကို သတျပဈခဲ့ပါတယျ။ အလားတူ မုဒိနျးကငျြ့သူရဲ့ သားကိုလညျး သတျပဈလိုကျပါတယျ။
အဲ့လိုနဲ့ နှဈ၂၀ကွာပွီးတဲ့အခါ မွရှေငျကွီးရဲ့ မွေးKumar ဟာ ရှာကိုပွနျလာပါတယျ။ ရှာသားတှကေတော့ အမုနျးမီးတှလေောငျနတေဲ့ မိနျးမပြို ဝိဉာဉျဟာ ခုထိရှိနတေုနျး ဖွဈတာမို့ မွေးဖွဈသူကိုလညျး သတျပဈလိမျ့မယျလို့ သတိပေးကွပါတယျ။
ဒါတှကေို မယုံကွညျတဲ့ မွေးဖွဈသူကတော့ ရှာမှာ ဆကျလကျနထေိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈညမှာတော့ မိနျးမပြိုတဈယောကျရဲ့ သီခငျြးညညျးသံကို ကွားရပွီး ဘယျသူဆိုမှနျး မသိရပါဘူး။
တဈရကျမှာ Kumar ရဲ့ ကုတျအင်ျကြီကို တဈစုံတဈယောကျက ယူဝတျသှားပွီး သိပျမကွာခငျမှာပဲ အဲဒီလူဟာ အသတျခံလိုကျရပါတယျ။ Kumar ရဲ့ အဘိုးနဲ့ အဖေ အသတျခံလိုကျရတဲ့ နရောမှာပဲ အဲဒီလူဟာ သဆေုံးနခေဲ့ပါတယျ။
ရှာသားတှပွေောတဲ့ မိနျးမပြို ဝိညာဉျက ခုထိရှိနတောလား? Kumarကွားနရေတဲ့ သီခငျြးသံက ဘယျကလာတာလဲ? ခုထိ မကအြေေးနိုငျသေးတဲ့ ဝိဉာဉျ လကျက လှတျမွောကျနိုငျပါ့မလား? အဘိုးနဲ့ အဖလေိုပဲ အသတျခံရမှာလား? …စတာတှကေိုတော့ ကိုယျ့ဟာကိုယျ ဆကျကွညျ့ကွပါတော့လို့ 😛
ဒါတှကေတော့ အင်ျဂလိပျသရဲကားတှေ၊ ကိုရီးယား ဂပြနျ ရုပျရှငျတှကေို ရိုးအီလာတဲ့အခါ ပွောငျးကွညျ့သငျ့တဲ့ ဘောလိဝုဒျ သရဲကားကောငျးတှပေါ ယောငျးတို့ရေ…
Tagged #fun #horror #movie_review #bollywood
FUN Motivation Movie Reviews
ချစ်သူများနေ့မှာ ချစ်သူမရှိတဲ့ပျိုမေတို့ကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်များ
Posted on February 14, 2017 April 18, 2018 Author Christina Rosy
အိမ်မှာ ပျင်းနေမယ့် ပျိုမေတို့အတွက် ရုပ်ရှင်ကား စာရင်းလေးပါ။ ဟိတ် ပျိုမေတို့ရေ အိမ်မှာနေရတာ ပျင်းနေလား။ ဒီရုပ်ရှင်ကားလေးတွေ ကြည့်လိုက်။ ပျော်ချင်သလား။ ငိုချင်သလား။ အက်ရှင်ကား အကောင်းစားကို ကြည့်ချင်တာလား။ လေဒီကြိုက်တာပြော။ 1) Penguins of Madagascar Admin က ကာတွန်းကြိုက်သူမို့ ဒီကားလေးကို ဦးစားပေးရွေးတာပါ။ ခွီချက်တွေကတော့ ပြောမနေနဲ့နော်။ အခွေစဖွင့်တာနဲ့ ပါးစပ်မစိရဘူးသာမှတ်။ နမူနာကြည့်ချင်ရင် ကြည့်လို့ရအောင် trailer ပါ ထည့်ထားပေးတယ်။ 2) Hachi ဒီကားလေးလည်း သိသူများပါတယ်။ မကြည့်ရသေးသူတွေအတွက်ကတော့ အသစ်ပေါ့။ သစ္စာရှိလွန်းတဲ့ ခွေးလေး တစ်ကောင် အကြောင်းပါ။ သူကတော့ အငိုတစ်လိုင်း။ :'( အောက်မှာ […]
Posted on November 23, 2018 November 23, 2018 Author Sugar Cane
လူမနီးတဲ့ တောနက်ထဲမှာ ချောမောလှပလွန်းတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ
ကိုယ်ဝတ်တဲ့ဝတ်စုံနဲ့ လိုက်ဖက်တဲ့ရတနာကို ဘယ်လိုရွေးရမလဲ?